प्रियंका र आयुष्मानले चितवनमा गरे प्रेम प्रदर्शन ! « Ramailo छ
प्रियंका र आयुष्मानले चितवनमा गरे प्रेम प्रदर्शन !
समय : 8:07 pm
गोपिकृष्ण फिल्म अवार्डमा खुलम खुला चुम्वन गरेर चर्चा र आलोचनाको पात्र बनेको नायिक प्रियंका कार्की र आयुष्मान देशराजको जोडीले पुनः चर्चामा आउने कार्य गरेको छ । चितवन पुगेर यो जोडीले खुलेरै प्रेम प्रदर्शन गर्यो ।
टिभिएस स्कुटरको शो रुम उद्घाट गर्न चितवन पुगेकी प्रियंकालाई आयुष्मानले जुरुक्कै पार्दा उनीहरुको प्रेम चर्चा पुनः सुरु भएको हो । आफ्ना भनाई राखी स्टेजबाट ओर्लने क्रममा प्रियंकालाई आयुष्मानले काखीमा राखी तल झारेका थिए । चर्चित प्रेम जोडीको यो दृश्य नै मिडियाको लागि मसला बन्यो ।
बेला बेलामा चर्चा र अलोचना भैरहने प्रियंका र आयुष्मानको यो घटनालाई उनका शुभचिन्तकले कसरी लिन्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । फिल्म ‘यस्तो प्रेम कथा’मा प्रियंका र आयुष्मान भर्खर अनुबन्धित भएका छन् ।